Iilwimi - AfricArXiv
Malunga ne-2000 iilwimi zalapha ekhaya zithethwa eAfrika. ISenegal, iNigeria neKenya zityale imali ekunyuseni nasekomelezeni iilwimi zesintu. Amandla anjalo okusasazwa kolwazi ahlala engachukunyiswa luluntu lophando lwenzululwazi e-Afrika okwangoku. Sicinga ukuba abantu abaninzi banokuba nomdla wokwabelana nolwazi ukuba banethuba lokukwenza ngeilwimi zabo zenkobe.
Isishwankathelo sesiNgesi nesiFrentshi
Nceda unike isishwankathelo esifutshane ngesiFrentshi / isiNgesi kunye nesiqwengana sokuvala izikhewu zolwimi phakathi kwe-francophone ne-anglophone Afrika.
Inguqulelo inokuzenzekelayo ngokusebenzisa Isiguquleli sikaGoogle or DeepL - kulo nto icala Nceda wongeze inqaku, elifana ne "Auto-translated with [Google Translate / DeepL]".
IAfrikaArxiv ingasetyenziselwa ukuphathwa kweprojekthi kulwimi lwasekhaya (kunye namagqabantshintshi aqokelelweyo) ukuze lo mbhalo-myalezo ungeniswe kwindawo ekhethekileyo egcinwe kwisiNgesi.
Sikhuthaza ukungeniswa kwiilwimi ezisetyenziswa rhoqo ngabantu bezenzululwazi kwilizwe elifanayo, njengesiNgesi, isiFrentshi, isiSwahili, isiBhulu, isiBhulu, isiIgbo, isiAkan, okanye ezinye iilwimi zomthonyama zaseAfrika. Imibhalo ebhaliweyo engeniswe ngolwimi olungelulo olungesiNgesi iya kubanjwa kumgangatho wokumodareyitha de sibe siqinisekisiwe. Siyakukhuthaza ukuba ucebise abantu abanokukunceda ukumodareyitha kulwimi lwakho.
Ukuguqulwa kwemibhalo ebhaliweyo
Ngaphambi kokuba uqalise ukunxibelelana nababhali benqaku lokuqala ngemvume yabo yangaphambili kunye nolwazi.
Isihloko esiphambili kufuneka ibe sisihloko esiguqulelweyo; Ibonisa ukuba le yinguqulelo yombhalo-ngqangi okhoyo (umz. [SW> EN] elandelwa sisihloko esiguquliweyo soguqulelo ukusuka kwisiSwahili ukuya kwisiNgesi). Yongeza isihloko santlandlolo njengombhalo ongezantsi ukwenza ukuguqulelwa kufumaneke. Ikhonkco kuxwebhu lolwimi lwantlandlolo kunye nengxelo ecacileyo yoguqulelo kufuneka ibandakanywe kwiphepha lokuqala.
Yongeza i-metadata eyongezelelweyo nefanelekileyo.
Iilwimi zaseAfrika kwiwebhusayithi yethu
Ubonile ukuba ungalutshintsha ulwimi lwewebhusayithi yethu ibe sisiHausa, isiSwahili, isiXhosa okanye isiAmaranth phakathi kwezinye iilwimi ezithethwa kwilizwekazi?
Iwebhusayithi yeArthurXiv iguqulelwe ngokuzenzekelayo yi Ikhasii.io nge-wp plugin ukusuka kwisiNgesi ukuya kwiilwimi ezili-19. Uguqulelo lulungile kodwa alugqibeki, kutheni…. Sikhangela amavolontiya ukusinceda ukuphucula izicatshulwa eziguqulweyo kwiwebhusayithi yethu. Ukuzibandakanya kule nzame yasekuhlaleni nceda uthumele imeyile ku igalelo@africarxiv.org.
Okwangoku, sinika umxholo wethu kwezi lwimi zilandelayo:
French isiJamani Hausa Hindi Igbo
Malagasy isiPhuthukesi Sesotho somali Sunda
Swahili isiXhosa Yoruba isiZulu
Guqula kunye nathi
Thumela i email ukunceda ukuguqulela nasiphi na isibhengezo esidweliswe apha ngezantsi kunye namanyathelo afanelekileyo okwahluka kunye nokubandakanywa kwimfundo ePhakamileyo, kuphando nakupapasho lwezifundo:
. Cinga ukuba Hambisa
. I-Helsinki Initiative